Home Wararka Farmaajo oo qorsheynaya inuu ciidanka Uganda ku badalo kuwa ka socda Rwanda
Farmaajo oo qorsheynaya inuu ciidanka Uganda ku badalo kuwa ka socda Rwanda
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaanaday Farmaajo ayaa in mudo ah qorsheynayay inuu ciidanka Uganda ka jooga Soomaaliya uu ka saaro dalka. Waxa uu kulamo kala duwan kula yeeshay dalka Turkiga madaxdii ka qaybgalaysay shirkii Turkiga iyo Afrika. Waxa uuna madaxdaas ku dhiirigaliyay in any ciidan keenaan Soomaaliya.
Farmaajo ayaa cadaawad gaar ah u qaaday madaxda iyo ciidanka dalka Uganda kuwaas oo uu ku eedeeyay in qayb ka ahaayeen qorshii shaqada looga ceyriyay markii la qabtay shirki loogu magacadaray Kampala Accord.
Farmaajo oo arintaas daba socda ayaa waxa uu wafdi u diray dalka Rwanda si ay uga soo wadahadlaan qaabka ay ciidanka ka socda Rwanda u imaan lahaayeen dalka Soomaaliya.
Dhanka kale, Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah Cabdisaciid Muuse Cali, ayaa sabtidii maanta dhiggiisa dalka Rwanda Mudane Vincent Biruta, la saxiixday Heshiis Is-afgarad ah oo dhinac socday Shirweynaha Midowga Afrika ee ka dhacaya magaalada Addis Ababa.
Previous articleAl Shabaab oo sheegtay in ay qabsadeen degmada Diinsoor
[XOG] Villa Somalia oo ka war heshay in Guddoomiyah FIET ay...